in Health and beauty, Lifestyle, Lotaya
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကူးစက်မှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့အရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကို လူတော်တော်များများက ငြီးငွေ့ကြပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ တံခါးလက်ကိုင်တွေကို စနစ်တကျပိုးသတ်ဆေးတွေဖြန်းနေကြတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင်သတိမထားမိတဲ့ သန့်ရှင်းလုပ်ရမယ့်နေရာတွေရှိနေပါသေးတယ်။
၇ ။ TV Remote
Remote controls တွေဟာ တကယ့်စူပါညစ်ပတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ သင့်အနေနဲ့ ၎င်းတို့ကို ဘယ်တော့မှ မသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင် ဘတ်တီးရီးယားတွေ၊ ရောဂါပိုးတွေက ကြီးထွားနေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ Remote Control ကို တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်ပါတယ်။
၆ ။ ရေခဲခွဲစက်
သင့်ရဲ့ ရေခဲသေတ္တာကို မှန်မှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ASAP စတင်သင့်ပါတယ်။ လူတွေက သူတို့ရဲ့ ရေခဲသေတ္တာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပေမယ့် ရေခဲခွဲစက်ကိုတော့ မေ့တတ်ကြပါတယ်။ ရေတွေရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် ပိုမွှားတွေဟာ ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ container အတွင်းပိုင်းမှာ မှိုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အထူးသန့်ရှင်းတဲ့ရေ ဒါမှမဟုတ် လူအများစုသုံးကြတဲ့ ရှာလကာရည်နဲ့ သန့်ရှင်းပါ။
၅ ။ ယောဂကျင့်တဲ့ ဖျာ
သင့်အိမ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းဖို့ ယောဂဖျာတစ်ချပ်တော့ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် အဲ့ဒါကိုရော မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါသလား? သင့်လေ့ကျင့်တဲ့အခါတိုင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ချွေးတွေဟာ ဖျာမှာပဲ ကပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် အဲ့ဒီ့နေရာမှာ ဖုန်တွေရှိနေနိုင်တာကြောင့် ပိုးမွှားတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တော်တော်ဆိုးဆိုးညစ်ပတ်မှုမျိုးပါ။ ဒါ့ကြောင့် ယောဂဖျာကို အသုံးပြုပြီးတိုင်း သန့်ရှင်းပါ။
၄ ။ Hairbrushes နဲ့ ခေါင်းဖြီးများ
အနည်းဆုံးတစ်ပတ်မှာ တစ်ခါတော့ ကျွန်မတို့ခေါင်းလျှော်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ Hairbrushs (သို့) ခေါင်းဖြီးကိုရော ဘယ်အချိန်မှာ နောက်ဆုံးသန့်ရှင်းခဲ့ပါသလဲ? သင့်ရဲ့ ဆံပင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထုတ်ကုန်အားလုံးနှင့် ဆံပင်အဆီတွေဟာလည်း သင့်ရဲ့ ခေါင်းဖြီးတွေပေါ်မှာ ကျန်ရှိနေခဲ့တာပါ။ ၎င်းတို့က Gunky တွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ အနည်းဆုံးတစ်လကို တစ်ကြိမ်လောက်တော့ Hairbrushes နှင့် ခေါင်းဖြီးတွေကို ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ ပုံမှန်ခေါင်းဖြီးတဲ့အချိန်မှာလည်း ခေါင်းဖြီးမှာကျန်နေခဲ့တဲ့ ဆံပင်တွေကို ဖယ်ရှားပါ။
၃ ။ Coffee Maker
Coffee Maker ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ညစ်ပတ်နေရာလို့ သိပ်မထင်ရပါဘူး၊ နောက်ဆုံးမှာ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေကို အသုံးပြုပြီးနောက်ဆုံးမှာ ကော်ဖီကို ရရှိခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာတော့ တော်တော်လေးညစ်ပတ်ကြပါတယ်။ ကော်ဖီစက်ကုမ္ပဏီတွေဟာ သင့်ရဲ့ coffee maker ကို အကြိမ်ကြိမ်သန့်ရှင်းဖို့နှင့် အတွင်းပိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ စပရှယ်သန့်ရှင်းသောအရည်ကိုသာ အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
၎င်းဟာ ၎င်းကိုယ်တိုင်ပဲ သန့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုလို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ ထင်မြင်ချက်သက်သက်ပါပဲ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အဝတ်လျှော်စက်တွေမှာ မှိုတွေဟာ ကြီးထွားလာကြပါတယ်။ ၎င်းက သင်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အနံ့တွေတောင်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အဝတ်လျှော်စက်ကို အပူချိန်အမြင့်ဆုံးမှာထားပြီး ဆေးကြောသန့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာမှုန့်အစား ရှလကာရည်ကို သုံးပါ။
ကျွန်မတို့ဟာ တစ်နေ့ကို မီးခလုတ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖွင့်ပြီး ဘယ်လောက်ပိတ်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားနိုင်ကြမှာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ရဲ့ လက်တွေကတစ်ဆင့် ပိုးမွှားတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ပျံ့နှံ့စေပါတဘ်။ ဒါ့ကြောင့် အိမ်တံခါးနှင့် ရေချိုးခန်းမီးခလုတ်တွေနဲ့ တစ်အိမ်လုံးက မီးခလုတ်တွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သန့်ရှင်းပေးပါ။